သန်းထိုက်ဦး| January 11, 2013 | Hits:2,607
3 | | ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တနေရာတွင် ယခုလ ၇ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ၃ ရက်ကြာ ကျင်းပသည့် UNFC ၂ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးအပြီး ယမန်နေ့က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ (ဓာတ်ပုံ – သန်းထိုက်ဦး / ဧရာဝတီ)
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Lailun January 11, 2013 - 1:37 pm	Well! The SSA was promised by Aung Min that the government troops would not attack them but it was empty promise. As long as Burmese military is not under the president’s power, what can Aung Min do with the UNFC? Another empty promise again?
Reply	thihamin January 11, 2013 - 9:23 pm	နိုင်ဟံသာ သို့ –